Musharax Xuseen Cabdi Xalane “ Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday, waxa uu ku soo baxay Banaanbaxyo Caruur iyo dumar la kacsho, waana xaq banaanbaxa waana dhacayaa. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Musharax Xuseen Cabdi Xalane “ Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday, waxa uu ku soo...
Musharax Xuseen Cabdi Xalane “ Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday, waxa uu ku soo baxay Banaanbaxyo Caruur iyo dumar la kacsho, waana xaq banaanbaxa waana dhacayaa.
Musharax Xuseen Cabdi Xalane, Wasiirkii hore ee Maaliyada ayaa ka hadlay banaanbaxa lagu wado in uu ka dhaco Magaalada Muqdisho maalinta bari ah.
Xalane oo ka mid ah Musharixiinta ku Midoobay Banaanbaxa bari dhacay, ayaa sheegay in sharciga iyo Dastuurka Dalka u yaala uu dhigayo in la qaban karo Banaanbax Nabadeed oo aan dhibaato keenin.
“ Dastuuurka Dalka ayaa dhigaya in Dalka uu ka dhici karo Banaanbaxyo Nabadeed Marka yaan la buun Buunin Banaanbaxyadaan horay ayay dalka uga dhici jireen, Madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday waxa uu ku soo baxay banaanbax iyo Habro Caruur la kacsho”ayuu yiri Xalane.
“ Ciidamada amaanka Qaranka Waxaan ugu baaqayaa in ay Banaanbaxaas ka Gutaan shaqadii ku waajibka ahayd, oo ah in ay ilaaliyaan amaanka shacabka iyo Madaxda Qaranka oo bari halkaas iskugu imaan doona”ayuu yiri Xalane Mar kale.
Sidoo kale banaanbaxa lagu wado in uu bari ka dhaco taalada Daljirka Dahsoon ayaa ah mid ay ka soo Qeybg gali doonaan Kumanaan kun.
Previous articleXasan shekh iyo shekh sharif oo 4-0 diray Cumar Finish iyo Cali Yare Markii ay xalay ka guureen Hotel Jazera ayna dageen Hotelka Naasa-hablood…
Next articleMaxaa la filan karaa berrito?
axmed shiikh - January 29, 2021 0
"HAMBALYO BULSHADA GOBOLKA BANAADIR" Maanta 28.01.2021 Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu saxiixay Xeer uu ku meelmarinayo go'aankii Golaha Shacabka BFS uu 27.06.2020 ku ansixiyey 13ka...
Afhayeenka Xukuumada Macalimuu oo bartiisa Faceboook soo dhigay halka uu ka...